MR MRT: အန္တရာယ်ကင်း
"ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၊ ပြဿနာကင်းပြီး ချမ်းချမ်းသာသာ နေချင်ကြတာကတော့ သက်ရှိသတ္တဝါ အားလုံးပါပဲ။
လောကသားတွေ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ဖို့အတွက် လောကကို အုပ်ချုပ်သူတွေက စည်းကမ်းတွေ၊ ဥပဒေတွေ ချမှတ်ပေးကြတယ်။ စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဥပဒေနဲ့အညီ နေထိုင်ကြအောင် ကြပ်မတ်ပေးကြတယ်။
ဒါ့ပြင် စည်းကမ်းတွေ ဥပဒေတွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် လုပ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာ ခွဲခြားသိပြီး ကိုယ့်အတွက်ရော သူတစ်ပါးအတွက်ပါ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်သူတွေလည်း ရှိတာပဲ။ အန္တရာယ်ကင်းဖို့၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စောင့်ထိန်းကြတာ။ ဘေးကင်းပြီး ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ဒီနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ နှစ်သစ်ကုသိုလ်ဟာလည်း အန္တရာယ်ကင်းဖို့ ချမ်းသာဖို့ပဲ။ ရတနာသုံးပါးကို ပူဇော်ခြင်း ကုသိုလ်နည်းနဲ့ အန္တရာယ်ကို ကျော်နိုင်တယ်။ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ကံရဲ့အစွမ်းကို ဘုရားရှင်သာလျှင် အတိအကျ ဟောနိုင်တာ။ တစ်ခြားသူတွေကတော့ ကုသိုလ်က ကောင်းကျိုးပေးတယ်၊ အကုသိုလ်က မကောင်ကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီး ယေဘုယျပဲ ပြောနိုင်တယ်။ ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ဘယ်အကျိုးရတယ်၊ ဘယ်အကုသိုလ်ကြောင့် ဘယ်အပြစ်ရတယ်ရယ်လို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ပြုတဲ့ ကုသိုလ်ဟာ ဘေးအန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်၊ ချမ်းသာသုခ ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ယေဘုယျ နားလည်ထားပါ။
ရတနာသုံးပါးကို ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ ပူဇော်တယ်။ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် ဝေယျာဝစ္စပြုပေးပြီး ပူဇော်တယ်။ အဆုံးအမကို လိုက်နာပြီး အကျင့်နဲ့ ပူဇော်တယ်။ ပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်၊ အခြားအခြားသော ပြုပြုသမျှကုသိုလ်၊ ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ ဘေးကင်းနိုင်တယ်။ ချမ်းသာသုခ ရနိုင်တယ်။ ကုသိုလ်ဆိုတာ ကောင်းကျိုးပေးမှာ။
အန္တရာယ်ကင်းပြီး ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ ကုသိုလ်နည်း ကျင့်သုံးပါ။ အခြားသော နည်းလမ်းတွေကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးပါ။ အန္တရာယ် ကင်းကြပါစေ။"
Posted by Ashin Acara. at 7:49 AM
Labels: 04a. Talk - ဟောတရား